Wasiir Ku-xigeen Ku Dhintay Qaraxyadii Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho Iyo Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay – somalilandtoday.com
(SLT-Muqdisho)-Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday qaraxyo lagu qaaday dhismo ay ku yaallaa laba ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya.
Wasaaradaha Howlaha Guud iyo Guriyeynta iyo tan Shaqada iyo Shaqaalaha ayaa lasoo sheegaya in qaraxyada lala beegsaday.
Wali faahfaahin dheeraad ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay qaraxyadaas balse waxaa la xaqiijiyey geerida Wasiir ku xigeenkii Wasaaradda shaqada Xildhibaan, Saqar Ibrahim.
Ururka Alshabaab ee ka dagaallama Soomaaliya ayaa sheegtay in ay qaadeen weerarkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay qaraxyadii iyo weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho isagoo tacsi u direy qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu diley weerarka lagu qaaday Xarunta Wasaarada Shaqada iyo Arrimaha Bulshada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhammaan dadkii ku dhintay Qaraxyaddaasi uga tacsiyeeyay, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tilaabo qaadi doono.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihiisa ayaa falka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho si dhaqso ah uga hadlay marka loo eego weeraradii hore uga dhici jirey Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Qoraal uu ugaga hadlayo weerarkii maanta ee ka dhacay Muqdisho kusoo qoray Bartiisa Facebook.